သဘာဝအတိုင်း ကိုယ်အလေးချိန် တတ်စေမယ့် နည်းလမ်းများ - Lifestyle Myanmar
Home Fitness သဘာဝအတိုင်း ကိုယ်အလေးချိန် တတ်စေမယ့် နည်းလမ်းများ
သဘာဝအတိုင်း ကိုယ်အလေးချိန် တတ်စေမယ့် နည်းလမ်းများ
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အရွယ်ရောက်သူ ၄၆၂သန်းဟာ ကိုယ်အလေးချိန် မပြည့်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ၎င်းက ရေရှည်မှာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပြီး ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဝလွန်တာက ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းသလို ကိုယ်အလေးချိန်ကျတာဟာလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းပါဘူးနော်။ သင်ဟာ ပေါင်မပြည့်လို့ စိတ်ညစ်နေရသူဖြစ်ရင် ယခုဖော်ပြပေးမယ့် ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာများက အဝလွန်တာ၊ ပေါင်မပြည့်တာ၊(သို့) ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ရှိ/မရှိဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ BMI (Body Mass Index) တွက်ချက်နည်းကိုအသုံးပြုရန် အကြံပြုထားပါတယ်။ BMI တွက်ချက်တဲ့အခါမှာ ၁၈.၅ ထက်နည်းတဲ့ BMI ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ ပေါင်မပြည့်တဲ့သူ underweight တွေဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ အချို့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့် ဖြစ်ပြီး အချို့က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Metabolism မြင့်မားမှုကြောင့်- တချို့လူတွေက လူကောင်သေးပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ ဇီဝကမ္မက အလွန်မြင့်မားတာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်တတ်အောင် ကယ်လိုရီများပြားတဲ့ အစားအစာတွေ စားရင်တောင် မဝလာပါဘူး။
မိသားစုမျိုးဗီဇကြောင့်- တချို့လူတွေက BMI နည်းပြီး ပိန်ပိန်ပါးပါးမျိုးရိုးကနေ မွေးဖွားလာတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ကာယလှုပ်ရှားမှု မြင့်မားခြင်းကြောင့်- ရေကူးခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းကဲ့သို့သော ပုံမှန် ကာယလှုပ်ရှားမှုမြင့်မားအဆင့် မြင့်မားသူတွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါက သူတို့ရဲ့ ဇီဝကမ္မ အမြဲတမ်းမြင့်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီး အနားယူနေစဉ်မှာတောင် တနေ့တာရဲ့ ကယ်လိုရီတွေကို အများကြီးလောင်ကျွမ်းစေပါတယ်၊
ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကြောင့် – လူတစ်ယောက်မှာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ ရောဂါတွေရှိပါက ခဏတာ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့နည်းနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ-ကင်ဆာ၊ hyperthyroidism၊ ဆီးချိုနှင့် တီဘီတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကျရောဂါကြောင့် – စိတ်ကျရောဂါသည်တွေဟာ စားချင် သောက်ချင်စိတ်မရှိတာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်အလွန်အမင်း လျော့ကျနိုင်ပါတယ်။ ထို့သို့သော သူများဟာ အတတ်နိုင်ဆုံး ဆေးကုသမှု လိုအပ်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှု- အမြဲတမ်း စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားနေရသူတစ်ဦးဟာ များသောအားဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ အတွေးတွေနဲ့ အလုပ်များနေပြီး ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။
အစာစားခြင်း မူမမှန်တဲ့ရောဂါကြောင့် – anorexia nervosa, bulimia nervosa နှင့် အစာကျူးတဲ့ ရောဂါ ကဲ့သို့သော အစာစားခြင်း မူမမှန်တဲ့လူတွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်ကြပါဘူး။ အစားအသောက် မူမမှန်ခြင်းက အဓိကအားဖြင့် ဦးနှောက်ရဲ့ အချက်အလက်ပေးပို့မှုနှင့် သက်ဆိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာစွာ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေမယ့် နည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ?
၁။ ကျန်းမာတဲ့ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့် အဆီများ
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့် အဆီဓါတ်မြင့်မားတဲ့ အစားအစာများ စားသုံးခြင်းက ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်၊ ကာဗိုက စွမ်းအင်ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ကျန်းမာတဲ့ အဆီများက ကယ်လိုရီကို သိပ်သည်းစေတာကြောင့် တဖြည်းဖြည်းကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာစေပါတယ်။ ဆန်၊ အစေ့အဆန်များ၊ အဆီပြည့်ဒိန်ချဉ်၊ ကွေကာအုတ်၊ ထောပတ်သီး၊ ဥအမျိုးမျိုး၊ ဖရုံသီးနှင့် နေကြာစေ့များကို စားပေးပါ။
၂၊ ကယ်လိုရီ များများစားပါ
သီအိုရီအရ တစ်နေ့လျှင် ကယ်လိုရီ ၅၀၀ အပိုဆောင်း စားသုံးခြင်းက တစ်ပတ်အတွင်းမှာ ကိုယ်အလေးချိန်ကို တိုးစေပါတယ်။ ကယ်လိုရီများများစားပြီး အာဟာရသိပ်သည်းတဲ့ အစားအစာများကို ပိုမိုစားပါ။ မနက်၊ နေ့လယ်၊ ညစာအပြင် သရေစာပါ စားပေးပါ။ အာဟာရမဖြစ်တဲ့ ကယ်လိုရီများကို ရှောင်ပါ။ အခွံမာသီး၊ အစေ့အဆန်၊ ထောပတ်သီး၊ ပရိုတိန်းဖျော်ရည်၊ ဒိန်ချဉ်တို့ စားပေးပါ၊ ပေါင်မု့န်မီးကင်ပေါ်မှာ မြေပဲအနှစ်(သို့) ထောပတ်သီးအနှစ်သုတ်ပြီး စားပေးလို့ရပါတယ်။
၃။ ပရိုတိန်းများများ စားပါ
ပရိုတိန်းက ကိုယ်အလေးချိန်တိုးဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရေးကြီးဆုံး အာဟာရဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်သားတွေကို ပရိုတိန်းဖြင့် တည်ဆောက်ထားတာကြောင့် ပရိုတိန်းဓါတ် လုံလောက်အောင်စားခြင်းက အဆီအစား ကြွက်သားအလေးချိန်ကို တိုးစေပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်သူတစ်ဦးအတွက် အကောင်းဆုံး ပရိုတိန်းပမာဏက ၁.၅ ဂရမ်မှ ၂.၂ ဂရမ်အကြားဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုတိန်းကြွယ်ဝသော အစားအစာများဖြစ်တဲ့ အဆီပါတဲ့ငါး၊ အနီရောင်အသား၊ ဥအမျိုးမျိုး၊ အစေ့အဆန်အမျိုးမျိုး၊ အခွံမာသီး၊ ပဲမျိုးစုံ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများကိုစားပေးလို့ရပြီး ပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း တွေလုပ်နေပါက Whey protein မှုန့်ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
၄။ ကိုယ်ကာယ ခွန်အားကို တိုးတတ်အောင် လုပ်ပါ
ကိုယ်ခန္ဓာ ခွန်အားကို တိုးတတ်စေဖို့နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ပိုလျှံသော ကယ်လိုရီများ အဆီအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းကို ရှောင်ရှားဖို့ အားကစားလုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကြွက်သားထုထည်ကို တိုးတတ်စေဖို့ တစ်ပတ်လျှင် အနည်းဆုံး ၄-၅ကြိမ်လောက် အားကစားခန်းမကို သွားပါ။
ရေသောက်ခြင်းက စားသုံးမယ့် အစာပမာဏကို လျော့ကျစေတာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေတာနဲ့ အဓိပ္ပာယ်တူပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အစာစားရင်း သို့မဟုတ် အစာမစားခင် ရေမသောက်ပါနဲ့။ ရေသောက်တာက ကိုယ်အလေးချိန်တိုးဖို့ မကူညီပေမယ့် ရေဓါတ်ခန်းခြောက်မှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှ အဆိပ်အတောက်များကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ ရေဓါတ်ပြည့်ဝစေဖို့ ပရိုတိန်းဖျော်ရည်သောက်ပေးလို့ရပါတယ်။ အချို့သော ဆရာဝန်များကတော့ ရေပိုသောက်တာက ကိုယ်အလေးချိန်တိုးတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
လိုအပ်တာထက် ကယ်လိုရီပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေတာကြောင့် (ခုန်ပေါက်ပြီးဆော့ကစားရတဲ့) cardio လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အလွန်အကျွံ မလုပ်ပါနဲ့။ cardio လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုံးဝလျစ်လျူရှုမထားဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အခြားနေ့တွေမှာ ကိုယ်အလေးချိန် ထရိန်နင်ပေါ်မှာသာ အာရုံစိုက်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်တိုးအောင် တချို့လူတွေက ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်တဲ့ junk food တွေကို စားသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာကို ရှောင်ပါ။ ကျန်းမာစွာဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးဖို့ အချိန်၊ စိတ်ရှည်မှုနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှု များစွာ လိုအပ်ပါတယ်။
သဘာဝအတိုင္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္တတ္ေစမယ့္ နည္းလမ္း
ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ အ႐ြယ္ေရာက္သူ ၄၆၂သန္းဟာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မျပည့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ၎က ေရရွည္မွာ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစၿပီး ဆိုးက်ိဳးေတြကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ အဝလြန္တာက က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းသလို ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်တာဟာလည္း က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းပါဘူးေနာ္။
သင္ဟာ ေပါင္မျပည့္လို႔ စိတ္ညစ္ေနရသူျဖစ္ရင္ ယခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ က်န္းမာစြာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးလာေစမယ့္ နည္းလမ္းေလးေတြကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါေနာ္။
ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာမ်ားက အဝလြန္တာ၊ ေပါင္မျပည့္တာ၊(သို႔) က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရွိ/မရွိဆိုတာကို ဆုံးျဖတ္ဖို႔ BMI (Body Mass Index) တြက္ခ်က္နည္းကိုအသုံးျပဳရန္ အႀကံျပဳထားပါတယ္။ BMI တြက္ခ်က္တဲ့အခါမွာ ၁၈.၅ ထက္နည္းတဲ့ BMI ရွိတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေပါင္မျပည့္တဲ့သူ underweight ေတြျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
ကိုယ္အေလးခ်ိန္မျပည့္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕က စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
Metabolism ျမင့္မားမႈေၾကာင့္- တခ်ိဳ႕လူေတြက လူေကာင္ေသးပါတယ္၊ သူတို႔ရဲ႕ ဇီဝကမၼက အလြန္ျမင့္မားတာေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တတ္ေအာင္ ကယ္လိုရီမ်ားျပားတဲ့ အစားအစာေတြ စားရင္ေတာင္ မဝလာပါဘူး။
မိသားစုမ်ိဳးဗီဇေၾကာင့္- တခ်ိဳ႕လူေတြက BMI နည္းၿပီး ပိန္ပိန္ပါးပါးမ်ိဳး႐ိုးကေန ေမြးဖြားလာတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကာယလႈပ္ရွားမႈ ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္- ေရကူးျခင္း၊ ေျပးျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ပုံမွန္ ကာယလႈပ္ရွားမႈျမင့္မားအဆင့္ ျမင့္မားသူေတြဟာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါက သူတို႔ရဲ႕ ဇီဝကမၼ အၿမဲတမ္းျမင့္ေနတာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အနားယူေနစဥ္မွာေတာင္ တေန႔တာရဲ႕ ကယ္လိုရီေတြကို အမ်ားႀကီးေလာင္ကြၽမ္းေစပါတယ္၊
က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ – လူတစ္ေယာက္မွာ က်န္းမာေရးအေျခအေန တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုတဲ့ ေရာဂါေတြရွိပါက ခဏတာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ-ကင္ဆာ၊ hyperthyroidism၊ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ တီဘီတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
စိတ္က်ေရာဂါေၾကာင့္ – စိတ္က်ေရာဂါသည္ေတြဟာ စားခ်င္ ေသာက္ခ်င္စိတ္မရွိတာေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္အလြန္အမင္း ေလ်ာ့က်ႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔သို႔ေသာ သူမ်ားဟာ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေဆးကုသမႈ လိုအပ္ပါတယ္။
စိတ္ဖိစီးမႈ- အၿမဲတမ္း စိတ္ဖိစီးမႈ ခံစားေနရသူတစ္ဦးဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ၊ အေတြးေတြနဲ႔ အလုပ္မ်ားေနၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းႏိုင္ပါတယ္။
အစာစားျခင္း မူမမွန္တဲ့ေရာဂါေၾကာင့္ – anorexia nervosa, bulimia nervosa ႏွင့္ အစာက်ဴးတဲ့ ေရာဂါ ကဲ့သို႔ေသာ အစာစားျခင္း မူမမွန္တဲ့လူေတြဟာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မျပည့္ၾကပါဘူး။ အစားအေသာက္ မူမမွန္ျခင္းက အဓိကအားျဖင့္ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေပးပို႔မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါတယ္။
က်န္းမာစြာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြက ဘာေတြလဲ?
၁။ က်န္းမာတဲ့ ကာဘိုဟိုက္ဒရိတ္ႏွင့္ အဆီမ်ား
ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္ႏွင့္ အဆီဓါတ္ျမင့္မားတဲ့ အစားအစာမ်ား စားသုံးျခင္းက က်န္းမာေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစတဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္၊ ကာဗိုက စြမ္းအင္ကို ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး က်န္းမာတဲ့ အဆီမ်ားက ကယ္လိုရီကို သိပ္သည္းေစတာေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးလာေစပါတယ္။ ဆန္၊ အေစ့အဆန္မ်ား၊ အဆီျပည့္ဒိန္ခ်ဥ္၊ ေကြကာအုတ္၊ ေထာပတ္သီး၊ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဖ႐ုံသီးႏွင့္ ေနၾကာေစ့မ်ားကို စားေပးပါ။
၂၊ ကယ္လိုရီ မ်ားမ်ားစားပါ
သီအိုရီအရ တစ္ေန႔လွ်င္ ကယ္လိုရီ ၅၀၀ အပိုေဆာင္း စားသုံးျခင္းက တစ္ပတ္အတြင္းမွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို တိုးေစပါတယ္။ ကယ္လိုရီမ်ားမ်ားစားၿပီး အာဟာရသိပ္သည္းတဲ့ အစားအစာမ်ားကို ပိုမိုစားပါ။ မနက္၊ ေန႔လယ္၊ ညစာအျပင္ သေရစာပါ စားေပးပါ။ အာဟာရမျဖစ္တဲ့ ကယ္လိုရီမ်ားကို ေရွာင္ပါ။ အခြံမာသီး၊ အေစ့အဆန္၊ ေထာပတ္သီး၊ ပ႐ိုတိန္းေဖ်ာ္ရည္၊ ဒိန္ခ်ဥ္တို႔ စားေပးပါ၊ ေပါင္မု႔န္မီးကင္ေပၚမွာ ေျမပဲအႏွစ္(သို႔) ေထာပတ္သီးအႏွစ္သုတ္ၿပီး စားေပးလို႔ရပါတယ္။
၃။ ပ႐ိုတိန္းမ်ားမ်ား စားပါ
ပ႐ိုတိန္းက ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေရးႀကီးဆုံး အာဟာရျဖစ္ပါတယ္။ ႂကြက္သားေတြကို ပ႐ိုတိန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားတာေၾကာင့္ ပ႐ိုတိန္းဓါတ္ လုံေလာက္ေအာင္စားျခင္းက အဆီအစား ႂကြက္သားအေလးခ်ိန္ကို တိုးေစပါတယ္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မျပည့္သူတစ္ဦးအတြက္ အေကာင္းဆုံး ပ႐ိုတိန္းပမာဏက ၁.၅ ဂရမ္မွ ၂.၂ ဂရမ္အၾကားျဖစ္ပါတယ္။ ပ႐ိုတိန္းႂကြယ္ဝေသာ အစားအစာမ်ားျဖစ္တဲ့ အဆီပါတဲ့ငါး၊ အနီေရာင္အသား၊ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေစ့အဆန္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အခြံမာသီး၊ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုစားေပးလို႔ရၿပီး ျပင္းထန္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း ေတြလုပ္ေနပါက Whey protein မႈန္႔ကို အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။
၄။ ကိုယ္ကာယ ခြန္အားကို တိုးတတ္ေအာင္ လုပ္ပါ
ကိုယ္ခႏၶာ ခြန္အားကို တိုးတတ္ေစဖို႔ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ ပိုလွ်ံေသာ ကယ္လိုရီမ်ား အဆီအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ေရွာင္ရွားဖို႔ အားကစားလုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ႂကြက္သားထုထည္ကို တိုးတတ္ေစဖို႔ တစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းဆုံး ၄-၅ႀကိမ္ေလာက္ အားကစားခန္းမကို သြားပါ။
ေရေသာက္ျခင္းက စားသုံးမယ့္ အစာပမာဏကို ေလ်ာ့က်ေစတာေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစတာနဲ႔ အဓိပၸာယ္တူပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစာစားရင္း သို႔မဟုတ္ အစာမစားခင္ ေရမေသာက္ပါနဲ႔။ ေရေသာက္တာက ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးဖို႔ မကူညီေပမယ့္ ေရဓါတ္ခန္းေျခာက္မႈကို ကာကြယ္ေပးၿပီး ခႏၶာကိုယ္မွ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ထုတ္ေပးပါတယ္။ ေရဓါတ္ျပည့္ဝေစဖို႔ ပ႐ိုတိန္းေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ေပးလို႔ရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆရာဝန္မ်ားကေတာ့ ေရပိုေသာက္တာက ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။
လိုအပ္တာထက္ ကယ္လိုရီပိုမိုေလာင္ကြၽမ္းေစတာေၾကာင့္ (ခုန္ေပါက္ၿပီးေဆာ့ကစားရတဲ့) cardio ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို အလြန္အကြၽံ မလုပ္ပါနဲ႔။ cardio ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို လုံးဝလ်စ္လ်ဴရႈမထားဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ပတ္ကို တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး အျခားေန႔ေတြမွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ထရိန္နင္ေပၚမွာသာ အာ႐ုံစိုက္ပါ။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျမန္ျမန္တိုးေအာင္ တခ်ိဳ႕လူေတြက က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္တဲ့ junk food ေတြကို စားသုံးေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္တာကို ေရွာင္ပါ။ က်န္းမာစြာျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးဖို႔ အခ်ိန္၊ စိတ္ရွည္မႈႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ မ်ားစြာ လိုအပ္ပါတယ္။
Previous articleမျက်လုံးချင်းဆုံတဲ့ စကားပြောတဲ့ နည်းလမ်းက သင့်ရဲ့ဘဝကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သလား?
Next articleဖက်ရှင်ကျကျ ဝတ်စားဆင်ယင်လိုသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အမှားနဲ့အမှန်များ
ညိုမည်းနေတဲ့ ချိုင်းကြားအသားအရေကို ပြန်လည်ဖြူဖွေးလာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းကောင်းများ
သင်မဟားတရားစားချင်နေတဲ့ အစားအစာက ပြောပြနိုင်တဲ့ သင့်ကျန်းမာရေးအကြောင်း
ပျင်းလို့မဟုတ် အစားအသောက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
ကိုယ့်အိမ်က အိမ်သုံးပစ္စည်း ကိရိယာတွေကို အမြန်ဆုံးပျက်စီးသွားစေနိုင်တဲ့ အသုံးပြုပုံအမှားများ
Nandar Lwin - January 28, 2020
အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ အဝတ်လျှော်စက်၊ ရေခဲသေတ္တာ စတာတွေက တခါတလေ ပျက်ချိန်မတိုင်ခင်ဘဲ ပျက်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေ မြန်မြန် ပျက်စေအောင် လုပ်မိတတ်တဲ့အမှားတွေအကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာ ရေခဲ...
သင့်ကလေးတွေရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဂရုတစိုက်ဖြေပေးခြင်းရဲ့ အရေးပါမှု
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သေဆုံးသူ ၁၀၆ဦး ထိရှိလာပြီး ရောဂါကူးစက်မှု နှစ်ဆမြင့်တက်လာလို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအန္တရယ်မြင့်မားနေပြီ
ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမှာမဆို သင်လုံး၀ ယုံကြည်လို့မရတဲ့ တာ၀န်မဲ့လွန်းသော ရာသီခွင်၃ခု
ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ Influencer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် အရေးအကြီးဆုံး အချက် (၅) ချက်
အလုပ်သေချာပေါက်ရစေဖို့အတွက် အင်တာဗျူးသွားမဖြေခင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့် အချက်လေးတွေ
လူကို သေစေလောက်တဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လင်းနို့စွပ်ပြုတ်ကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်လာတာလို့ ဒေသခံအချို့ယုံကြည်နေကြ
အရမ်းဆင်းရဲတဲ့ မွေးစားမိဘနှစ်ပါးကို ချမ်းချမ်းသာသာထားနိုင်ဖို့ အလုပ်ကြိုးစားပြီး ကျေးဇူးဆပ်ခဲ့တဲ့ သား
Fitness App တစ်ခုပေါ်မှာ သမင်တစ်ကောင်ရဲ့ပုံရိပ်ဖန်တီးဖို့ လန်ဒန်တစ်ဝိုက်မှာ ၉နာရီကြာ စက်ဘီးစီးခဲ့တဲ့ စက်ဘီးစီးသမား
သူစိမ်းအသုဘမှာ လိုက်ငိုပေးရင် တစ်နှစ်ငိုကြွေးခ ဒေါ်လာ ၂၈၀၀၀ ရရှိမယ်
ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမှုကနေ ဒေါသအဖြစ် ပြောင်းလဲလာတဲ့ K-pop အဆိုတော် Goo Haraရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ဆက်ခံခွင့်ကိစ္စ
အဖေနဲ့အဖွားကွယ်လွန်ပြီးနောက် တစ်ယောက်တည်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ပြီး ဘဝကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့ ၁၀နှစ်အရွယ်ကလေး
သမိုင်းမှာ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် National STEM ပြိုင်ပွဲရဲ့ ထိပ်ဆုံးဆု (၅)ခုကို ရရှိခဲ့သော မိန်းကလေးများ
ကလေးဘဝတုန်းက Autism ရောဂါကြောင့် စကားမပြောခဲ့ပေမယ့် ဘာသာစကား ၉ခုကျော် ပြောနိုင်ပြီး သီချင်းတွေတောင် ရေးသားနိုင်ခဲ့တဲ့ (၇)နှစ်အရွယ် ကောင်လေး
အရာရာတိုင်းကို နက်ရှိုင်းစွာ ချစ်တတ်ပြီး ထိရှလွယ်သော မိန်းကလေးကို ချစ်သူတော်ထားတယ်ဆိုရင်
မှားယွင်းနေတဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုအတွက် သင်ခန်းစာများ
အပျင်းထူတဲ့မိန်းကလေးတိုင်း သဘောတွေ့မှာသေချာတဲ့ အလှအပထိန်းသိမ်းနည်းများ
ကတိသစၥာေၾကာင့္ အႏွစ္ ၆၀ ေရမခ်ိဳးဘဲ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေနတဲ့ အသက္ ၈၀အရြယ္အဖိုးအို
Health & Beauty855